Mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo cod aqlabiyad ah ku diiday dalab qiimo kordhineed oo xukuumada uga yimid. – Radio Daljir
Luulyo 22, 2011 12:00 b 0
Garowe, July 21 – Mudanayaasha baraalamaanka Puntland ayaa maanta dood aad u kulul ka yeeshay qorshe ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda ee dawladda Puntland kaasoo ku saabsanaa kordhinta qiimaha sarrifka dawladdu ay ku baddalato lacagaha shallin Soomaaliga ah ee canshuuraha ku yimaada kaasoo xildhibaannadu dib u celiyeen.
Qorshahaan ayaa ahaa mid golaha xukuumaddu ku dalbanayeen in 2,000 Sh Soomaali ah, lagu daro qiimaha dawladdu ku sarrifato lacagaha marka ay ku soo dhacaan Kastamada canshuuraha dawladda, kuwaasi oo dawladdu ku baddalato qiimo ka hooseeya midka suuqyada taasoo wax ku ool u ah dadka wax canshuurta. Dawladda ayaa qorshaheeda gundhig uga dhigtay, kuna sheegtay lacagaha kordhinta in daryeel waafi ah loogu fidin doono ciidamada.
Mudanayaasha oo dood-dheer ka yeeshay arrintaasi ayaa siweyn ugu kala aragti duwanaaday lacag kordhintaas iyagoo qaar badan oo ka mid ah ay tilmaameen lacagtani in ay culays ku noqon-karto dadweynaha sidaas darteena aan loo baahnayn xilligaan oo wakhti adag lagu jiro, hase ahaatee dhinaca kale soo dhawayeeyey daryeelka ciidamada.
Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka oo la dhacsanaa daryeelka ciidamada ee dawladda ballan-qaaday laakiinse diidanaa lacag kordhinta ayaa soo jeediyey in madaxyada maaliyadda loogu daro ciidanka lacag daryeel laakiinse aan shacabka la saaran culays midkooda ka badan.
Qodobkaasi oo mudanayaashu si weyn uga falan-qoodeen ayaa kaddib guddoomiyuhu sheegay in cod loo qaadi doono arrintaasi , waxaana cod gacan-taag ah oo loo qaaday ku diiday 21 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Puntland kuwaasi oo qayb ka ahaa 38 mudane oo goobta fadhiyey, halka 16-kalena ay soo dhaweeyeen qiimo-kordhintaasi iyadoo hal xildhibaanna uu ka aamusay.
Diidmada baarlamaanka ayaa xooggeedu ku salaysanaa faahfaahinta qorshaha rasmiga ah ee lacagahaan oo aan ku caddayn qoraalka wakiillada loo soo gudbiyey marka laga tago daryeelka guud ee ciidamada, waxaana ay xildhibaannadu sheegeen in loo baahnaa si qeexan arrintaasi in loo muujiyo, waxaana sidaas Radio Daljir u xaqiijiyey mudanayaasha iyo qaar ka mid ah madaxda baarlamaanka.
Dawladda ayaa markii ay qiimaysanayso lacagaha shillin Soomaaliga ah ee loogu geeyo canshuur ahaan ku dhufsata xagga qiimaha dollar-ka 280,000 oo shillin Soomaaliya kaasoo hadda golaha xukuumaddu ay soo gudbiyeen in laga dhigo 30,000 kordhintaasi dawladdu ay sheegtay in looga golleeyahay daryeel dhaqaale oo loo fidin-doono ciidamada taas darteena ay lagama maarmaan tahay in halkaasi laga qoondeeyo lacagahaasi.
Dawladda ayaa qorshaheedaan maanta laga hor-yimid ugu talo gashay in ay ku daryeesho ciidamada Puntland gaar ahaan, kuwa difaaca ku naafoobay iyo kuwa dhintay oo daryaalkaasi loo gaarsiin lahaa ehelki iyo ubadkii ay ka tageen.